AH: စင်ကာပူနှင့် မိုးကောင်းကင် အိပ်မက်များ
ပတိရူပ ဒေသ၀၀ါသောစ… သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အရပ်ဆိုတာ အသက်ကြီးလေ မြင်လာလေလေပဲ။ ကျွန်တော့် အသိ တော်တော်ချမ်းသာတဲ့ စုံတွဲဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ သား၊ သမီး နှစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကကောင်း၊ ပြည်စုံလို့။ စလုံးကို ကလေးတွေ ငယ်ငယ်ကထည်းကျောင်းထားရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး ကွန်ဒိုဝယ် အငှားတင်၊ ပြီးတော့ HDB မှာ ပြန်ငှားနေ။ အစပျိုးကြည့်လိုက်တာ။ ကလေးတွေက ဘာပြောလဲဆိုတော့… မေမေ.. သမီးတို့ ဘာဖြစ်လို့ ချက်ချင်း ဆင်းရဲသွားရတာလဲဟင်တဲ့။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် တိုက်ကလည်း အကြီးကြီး၊ ခြံကလည်း အကျယ်ကြီး၊ ကားတွေကလည်း အများကြီး။ အခု ဒီရောက်လာတော့ တိုက်သေးသေးလေးထဲမှာနေရတယ်။ ပြီးတော့ လမ်းလျှောက်ပြီး၊ ရထားစီးနေရတယ်။ သမီးတို့ ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟင်တဲ့။
ဆိုလိုတာက စလုံးကို လာတာ မှားတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လဲ ဒီမှာ အလုပ်လာလုပ်နေရတာပဲ.. ဆိုလိုတာက အိပ်မက်နဲ့ လက်တွေ့က နည်းနည်းတော့ ဟ တယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ ကျေနပ်ရင်တော့ ပျော်စရာကြီးပေါ့။ ကိုယ်မှန်းတာနဲ့ ဖြစ်လာတာနဲ့ ကီးသိပ်မကိုက်ရင်တော့ သံစဉ်ကောင်းကောင်း ဘယ်ထွက်မလဲပေါ့နော်…
နောက်တစ်ခုက စလုံးကို လာပြီး ကျောင်းထားလိုက်ရင် ကလေးတွေ တော်တော့်ကို ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက် ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းက ဘယ်ကျောင်းမှာ ထားပြီး ဘယ်ပညာကို သင်ပြီး၊ ဘာ ထမင်းစားလက်မှတ်ရမှာလဲ ပေါ်လဲ အများကြီးမူတည်သလို၊ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းပေါ်မှာလည်း အများကြီးမူတည်ပါတယ်။ ဆိုလေတော့ အောက်မှာပါတဲ့ Link လေးကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ စင်ကာပူက ကျောင်းတွေထဲမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကျောင်းပြီးတဲ့ ကျောင်းသားတွေထဲ ဘယ်ကျောင်းက ဘယ်ဘွဲ့နဲ့ ပြီးတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေထဲက ကျောင်းပြီးပြီးချင်း စလာအများဆုံးရတဲ့ ထိပ်ထိပ်ကြဲ ၁၀၀ စရင်းလေးပါ။ ထိပ်ဆုံး နံပါတ်တစ်ကျောင်းက SMU Law (4 years Programmed) က ကျောင်းထွက် ဆိုရင် S$ ၅၂၈၇ ပျမ်းမျှရနိုင်ပြီး နံပါတ်၁၀၀ ကတော့ SIT The Culinary Institute of America Bachelor of Professional Studies in Culinary Arts Management ဆိုရင်တော့ ပျမ်းမျှ S$ ၂၃၄၄ ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ Top 100 စာရင်းမှာတော့ SMU, NTU, NUS လို တက္ကသိုလ်တွေကပဲ ကြီးစိုးထားတာပေါ့လေ။ https://www.salary.sg/2018/graduate-employment-survey-2017-published-2018/
အဲ့.. ထိပ်ထပ်ကြဲဘွဲ့ရဖို့ဆိုရင်တော့ ထိပ်ထိပ်ကြဲ ပိုက်ပိုက်ကုန်မှာပေါ့နော်… နိုင်ငံခြားသား Non Subsidized Student ၄ နှစ်စာဆိုရင် စလုံးဒေါ်လာ ၁သိန်း ၈သောင်းကျော်လောက်အနည်းဆုံး ကုန်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် သိန်း ၁၈၀၀ ကျော် ပေါ့နော်။ နိုင်ငံသားနဲ့ PR ဆိုရင်တော့ ကျောင်းခက ၃ချိုး ၁ချိုးလောက် သက်သာပါတယ်။ ဒါကတော့ SMU Law ကျောင်းစရိတ်လေးပါ (Link)။ ဆိုတော့ Law နဲ့ကျောင်းပြီးရင် ပြီးပြီးချင်း ၅ ထောင်ကျော်နဲ့ အလုပ်တန်းရ။ လစာ တက် နောက် ၅ နှစ်နေရင် ဥုံဖွ ၁သောင်းခွဲရ ဆိုရင်တော့ ကျောင်းစရိတ်ကို အသက် ၃၀ မပြည့်ခင် ကျေလောက်မှာပေါ့။
ကိုယ်တွေကတော့ အဲ့ဒီလိုကျောင်းကြီးတွေ တက်ဖို့မပြောနဲ့ မြန်မာပြည်ကထွက်လာတုန်းက အဲ့ဒီ ကျောင်းနာမည်တွေတောင် ကြားဖူးတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီရောက် ကျွန်တော် အလုပ်စရတော့ အိမ်ကိုလှမ်းပြောဖြစ်တယ်။ အိမ်ကလည်း ရတဲ့ လစာကို မြန်မာငွေနဲ့ တန်းမြှောက်ပြီး လကုန်ရင် အဲ့လောက်ပို့လိုက်ဆိုတာ။ ဟင်… စားစရိတ်၊ သောက်စရိတ်၊ သွားစရိတ်၊ လာစရိတ် နှုတ်ရဦးမယ်လေ။ အဲ့ဒီမှာ ကျားကြီးရင် ခြေရာက လိုက်ကြီးလာပြီ။ မိုးကောင်းကင် အိပ်မက်များက စလာပြီ။ ကိုယ်တွေ ဒီမှာနေတာက ကျောချရင် ဖျာရှိတာမှ မဟုတ်တာ။ ရတဲ့လစာလေးက ဖွဖွ ဆေးရုံတက်လိုက်ရင် သွားကြားတောင် ညပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဆိုလေတော့ ဆေးရုံတက်ဖို့ Insurance လေးလဲ ၀ယ်ထားဦးမှ။ အဲ့ဒီတော့ တစ်လကို Insurance ဖိုးက အသက်သာဆုံး၊ အောက်ဆုံး၊ ဆေးရုံဘုရားစူး ကုတင်ပေါ်မှာ ၂ ရာက်လောက် လေးပေးနေ၊ ပြီးရင် အတင်းကန်ချ၊ ကျန်တဲ့ နောက်ပိုင်း ဆရာဝန်ဆီ လာပြ၊ ဆေးဝယ်၊ ဘာရီရ ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုယ်ခံဆိုတဲ့ ဖွတ်ကြား insurance တောင်မှ စလုံး ၁၀၀ ကျော်လောက်ပေးရတာ။ အလုပ်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် insurance ထားပေးတာတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ပြုတ်တာနဲ့ insurance လဲ ပြုတ်ပြီလေ။
အဓိကပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက မိုးကောင်းကင် အိပ်မက် အထမြောက်ဖို့ အရေး တစ်လ တစ်လ ၀င်ငွေ ဘယ်လောက်၊ စုငွေဘယ်လောက်၊ ထွက်ငွေဘယ်လောက်နဲ့ဆို ပြည့်မီနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကို ချိန်ဖို့ ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးချင်တာပါ။
စင်ကာပူမှာ ကျောင်းတက်၊ ကျောင်းပြီးလို့ PR နဲ့ ဘ၀စတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စင်ကာပူကို ရောက်လာ အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှ PR/ Citizen ပြောင်းပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်… စလုံးမှာနေချင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ အိပ်မက်ဆိုရင် ဒါလေးတွေကိုတော့ ဖြတ်သန်းရမှာပါ….
HDB Flat ၀ယ်ရန် အတွက် ကနဦး ကုန်ကျငွေ ပျမ်းမျှ
ကားတစ်စီး ၀ယ်ရန်အတွက် ကနဦး ကုန်ကျငွေ ပျမ်းမျှ
HDB Flat ၀ယ် - လစဉ်
ကလေး ၁ (မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ ဂျူနီယာကောလိပ်)
၁၅၅ ၊ ၂၆၀၊ ၃၄၀ (မူလတန်းကလေး)
ကလေး ၂ (မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ ဂျူနီယာကောလ်ိပ်)
၁၅၅ ၊ ၂၆၀၊ ၃၄၀ (အလယ်တန်းကလေး)
တစ်အိမ်ထောင် ကျန်းမာရေး အာမခံ
CPF – based on household income S$ 5000 (Mature 20%)
ကျန်ငွေ (based on household income S$ 5000)
အဲ့ဒါကို ကြည့်လိုက်ရင် တစ်လ လစာ ၅၀၀၀ ၀န်းကျင်ရှိတဲ့ မိသားစုမှာ အိမ်ရှိမယ်၊ ကားစီးမယ်ဆိုရင် ထမင်းစားတာမပါ၊ ကလေး private ကျူရှင်စရိတ်မပါကိုပဲ ၈၅၅ ကျပ်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ မတ်တတ်စာပဲ ရှိပါသေးတယ်၊ နေမကောင်းရင် ကုဖို့ တုန်းလုံးစား မပါသေးပါဘူး။
အသက် ၂၂~၂၅ နှစ်မှာ ဘွဲ့ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ယောကျာ်း/မိန်းမယူဖို့အတွက် ငွေစုရပါမယ်။ ပြီးရင် မင်္ဂလာဆောင်မှာ ချဲ့ရင် ချဲ့သလို စုငွေထဲက ပါသွားပါမယ်။ ဆိုတော့ ငွေကောင်းကောင်း မစုခဲ့ဘူးဆိုရင် အသက် ၃၀ ရောက်ရင် CPFထဲမှာ အိမ်ဝယ်ဖို့ ငွေ ၃သောင်းခွဲဝန်းကျင် ရှိဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ လိုတဲ့ငွေကို ဘဏ်ကချေးရင် တစ်ပူပေါ် နှစ်ပူ ဆင့်ဖို့ များပါတယ်။ ငွေမစုခဲ့ရင် အသက် ၃၀ အထိ စလုံးမှာ အိမ် မပိုင်သေးပါဘူး။ ဒီကြားထဲ လစာက အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက် မမီရင် အစိုးရက အိမ်ကောင်းကောင်း ပေးမ၀ယ်ပါဘူး။ အိမ်ခန်းနည်းရင် အိမ်ငှားခ ပြန်ရတာနည်းပါတယ်။ အသက် ၃၀ ကျော်မှ Plan စမယ်ဆိုရင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Burden အရမ်းများပါတယ်။
အိမ်ထောင်ကျသွားလို့ ရင်သွေးရတနာ ထွန်းကားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကလေးမွေးစရိတ်နဲ့၊ ကလေးပြုစုစရိတ်က ထပ်တက်လာမှာပါ။ အသက် ၃၀ ပြည့်ချိန်မှာ မိသားစု ၀င်ငွေ ၅၀၀၀ မကျော်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် ကားစီးဖို့ အခွင့် အရေးကို လက်လွှတ်ဖို့ အခြေအနေများသွားပါပြီ။ မိသားစုဝင်ငွေ ၂၅၀၀ အောက် လျှော့ရင်တော့ HDB ပိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ရဖို့ အခြေအနေတော်တော်များနေပါပြီ။ မိသားစု ၀င်ငွေ တစ်လ ၅၀၀၀ ကျော်ဖို့ဆိုရင် ဘွဲ့၊ အတွေ့အကြုံ၊ လုပ်သက်၊ အရည်အချင်း ပေါ်မူတည်ပြီး လစာကောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လင်ရော၊ မယားရော အလုပ်လုပ်ဖို့ လုပ်အပ်ကောင်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ အလုပ်အကြာကြီး ပြုတ်သွားလို့မရသလို၊ လစာ နည်းတဲ့ အလုပ်ကို ခုန်ဆင်းမသွားဖို့လဲ လိုပါသေးတယ်။
ဒါဟာ ရပ်တည်မှု့အတွက်ကိုပဲ ကြည့်ပါသေးတယ်။ အနာဂတ်အတွက် စုငွေလိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ ကြီးလာရင် ကျောင်းကောင်းကောင်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ ဘွဲ့ကောင်းကောင်းရပြီး၊ လစာကောင်းမယ်လို့ အကြမ်းဖျင်း ယူဆလို့ ရနိုင်လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက အိုမင်း မစွမ်းဖြစ်လာချိန်မှာ CPF အပြင် လက်ထဲမှာ ထပ်ဆောင်းငွေရှိမှ ဘ၀ နေသာထိုင်သာ ရှိမှာပါ။
ဆိုလိုရင်းကတော့ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုရဲ့ ၀င်ငွေ တစ်လ ၂၀၀၀၀ အထက်မှာ ရှိတယ်ဆိုရင် Saving Planကို သေသေချာချာ ချပြီး ကလေးတွေနောင်ရေးအတွက်ပါ option အများကြီးနဲ့ စဉ်းစားလို့ရတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်စုတစ်ခု တစ်လ ၀င်ငွေ ၁၅၀၀၀ နဲ့ ၂၀၀၀၀ ကြားထဲဆိုရင် သက်သောင့်သက်သာ နေလို့ရပြီး ဒါဟာ convenient zone ထဲကို ၀င်နေပါတယ်။ တစ်လ ၅၀၀၀ အောက်ဆိုရင်တော့ စလုံးမှာ အခြေချလို့ ရပေမယ့်… ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်ဖို့များပါတယ်။
အောက်မှာကတော့ category တစ်ခုချင်းစီအတွက် အကြမ်းဖျင်း Breakdown လေးပါ......
စလုံးမှာ Citizen သို့မဟုတ် PR ဆိုရင်တော့ HDB တိုက်ခန်း ၀ယ်လို့ရပြီး နိုင်ငံခြားသားဆိုရင်တော့ Condo ပဲ ၀ယ်လို့ရမှာပါ။ ခု HDB တိုက်ခန်း ၀ယ်မယ်ပဲထားပါတော့… အိမ်ထောင်စုတစ်ခုလုံးဝင်ငွေပေါ်မူတည်ပြီး HDB ၀ယ်လို့ရမယ့် HDB အခန်းတွေကို အစိုးရက သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုလုံးရဲ့ ၀င်ငွေပေါ်မူတည်ပြီး အစိုးရက အိမ်ဝယ်တဲ့ ချေးငွေကို သတ်မှတ်ပေးသလို (သူ့ဆီက ၀ယ်မယ့်တိုက်ကို သူ့ဆီက ပိုက်ဆံအရင်ချေး)၊ မဟုတ်ရင် ဘဏ်ကနေချေး၊ နောက် CPF ထဲကနေလည်း တစ်ချို့တစ်ဝက် ယူသုံးလို့ရပါတယ်။ ထားပါတော့… တစ်လ ဘယ်လောက် ကုန်မလဲပဲ တွက်မှာဆိုတာ ကျန်တာတွေ ကျော်ချပစ်လိုက်မယ်..
ဆိုပါဆို့ မြို့ထဲမဟုတ်တဲ့ (Non Mature area)မှာ4room flat HDB ကို အိမ်ထောင်စု ၀င်ငွေ ၅၀၀၀ ပတ်လည်နဲ့ ၂၅နှစ် ချေးငွေ နဲ့ ၀ယ်မယ်ထားပါစို့။ ပေါက်ဈေးက ဒေါ်လာ ၃၁၅,၀၀၀ လောက်ဝန်ကျင် ပေါက်တယ်ထားပါစို့။ down payment ၁၀% ကို CPF ordinary account ထဲမှာ ရှိပြီးသား.. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘဏ်ထဲမှာ ရှိပြီးသားဆိုရင် ကနဦးကုန်ငွေကို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်…
Stamp Duty for Signing of Agreement Lease
Stamp Duty and Legal Fees during key collection
Survey Fees ၂၇၅
လစဉ် ပေးငွေ ၂၅ နှစ် - အစိုးရ (HDB) အတိုးနှုန်း ၂.၆% - ဒေါ်လာ ၁၀၈၀.
စလုံးမှာ ကားစီးမယ်ဆိုရင်.. အပေါဆုံးကားကနေ စပြီး စဉ်းစားကြတာပေါ့… စလုံးမှာ အသစ်စက်စက် ဈေးအပေါဆုံးကားဆိုရင် ၁၀နှစ်စာ COE အပါ ဒေါ်လာ ၇၃၀၀၀ လောက်ဈေးလို့ အကြမ်းဖျင်းထားလိုက်ပါ...
၁၀ နှစ်စီးလို့ရသည့် ကားအသစ် - ဒေါ်လာ ၇၃၀၀၀ (1600 cc) - ၁,၂၉၂ ဒေါ်လာ
ကား + COE
ကားပါကင် + ဆီ
Posted by AH at 8/04/2018 04:53:00 PM
Aunty Tint September 5, 2018 at 10:20 AM
ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးသိခွင့်ရတာကျေးဇူးပါကွယ် AH ရေ.....
စကားမစပ်တီတင့်ဆီ စာမူအရောက်ပို့ပေးပါအုံးနော် ❤️